Sidee looga fal-celiyey kulankii RW Rooble iyo Mucaaradka? | KEYDMEDIA ONLINE
Sidee looga fal-celiyey kulankii RW Rooble iyo Mucaaradka?
Arrintan ayaanan la ogayn habka uu Rooble uga dhaadhicinayo Hoggaanka Villa Soomaaliya, oo isugu quudareynaya inuu boobo kuraas hor leh oo kuwaasi ka badan, si uu ugu soo baxo doorashadda loogu baratamayo jagada ugu sareeya dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Siyaasiyiinta, Aqoonyahanada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada Rayidka, ayaa aragtidooda ka dhiibtay kulankii shalay saacadaha badan u socday RW Rooble Iyo Midowga Musharaxiinta.
Dadka ku nool Muqdisho, ayaa sheegay in kulanka uu ku soo aaday xilligii loo baahnaa, islamarkaana Ra'iisul Wasaaraha laga doonayo inuu jawaab rasmi ah ka bixiyo habka ay u socoto doorashadda Aqalka Hoose, lana saxo qaladaadka ka jira, si loo xaliyo tabashadda Mucaaradka.
Siyaasiyiinta qaark ayaa ku taliyey in dib loo soo bilaabo doorashadda Gollaha Shacabka, sababo la xiriira tirada kuraasta la boobay oo aad u fara badan iyo qeylo dhaanta oo isa soo tareysa marba marka ka dambeysa.
Arrintan ayaanan la ogayn sida uu Rooble uga dhaadhicin karo Farmaajo, oo ah shaqsiga boobaya kuraasta, si uu ugu soo baxo doorashadda loogu baratamayo jagada ugu sareeya dalka.
Siyaasiyiinta qaar oo dareenkooda ka hadlayey, ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay habka daah-furnaanta ka fog ee ay ku bilaabatay doorashadda, waxayna ay soo dhaweeyeen kulan uu Ra'iisul Wasaaruhu ku baaqay in ay isugu yimaadaan Golaha Wadatashiga Qaran ee uu isagu hoggaanka u yahay.
Si kastaba shaki badan ayaa dul hogganaya xal u helida tabashada ay muujinayaan Mucaaradka iyo qeybaha bulshada, maadaama guddiyada doorashooyinka ay u muuqdaan kuwa ku milmay dhinacyada siyaasada, isla markaana ah ku xiran maafiyada sharci darrada ku fadhisa Madaxtooyada dalka.